Latest Myanmar News - Page2of 324 - News & Media
အော်တိုဂီယာရဲ့ သင်္ကေတများအား မှတ်သားရန်
September 24, 2021 by Latest Myanmar News
အော်တိုဂီယာရဲ့ သင်္ကေတများ ( P, R ,N, D,3,2 ,L) ကားတစ်စီးရဲ့ ဂီယာဘောက်လို့ခေါ်တဲ့ Transmission မှာ Manual (မန်နူရယ်) နဲ့ Automatic Transmission (အော်တိုဂီယာ) ဆိုပြီး ရှိကြပါတယ်။ ယခင်က မန်နူရယ်ဂီယာများအကို အသုံးပြုကြပေမယ့် ယနေ့ခေတ် အိမ်စီးကားတော်တော်များများမှာ အော်တိုဂီယာကို ပိုမိုအသုံးပြုလာကြပါတယ်။ ဒီလိုအသုံးပြုလာကြတာနဲ့အမျှ အော်တိုဂီယာကားတွေမှာပါတဲ့ စာလုံးလေးတွေကိုလည်း တိတိကျကျသိဖို့ လိုအပ်လာပါတယ်။ အော်တိုဂီယာမှာ AT နဲ့ CVT ဆိုပြီး နှစ်မျိုးထပ်ရှိပါတယ်။ AT နှင့် CVT တူညီတာက P- Park, R- Reverse, N- Neutral, D- Drive တို့ဘဲဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ထပ်အနေနဲ့ AT … Read more
ဒူးနာ၊ ခါးနာ၊ လေငန်း၊လေးဖက်နာအတွက် ဆေးနည်းလေးများ
September 24, 2021 September 24, 2021 by Latest Myanmar News
လေငန်း လေးဘက်နာ ဒူးနာ ခါးနာသမားများအတွက် ဆေးနည်းတိုလေးများ ဒူးနာ ခါးနာများအတွက် သဘာဝ ဆေးနည်းများကို စုစည်း၍ မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ မိမိနဲ့ အဆင်ပြေနိုင်မယ့် နည်းလမ်းကို ရွေးချယ် စမ်းသပ်နိုင်ကြပါတယ်နော်။ ဒူးနာ ခါးနာ အဆစ်မြစ်နာဝေဒနာကို ခံစားနေသည့် မိတ်ဆွေများအားလုံး အမြန်ဆုံးပျောက်ကင်းနိုင်ကြပါစေ။ လေဖြတ် လေငန်းလေးဘက်နာ ခါးနာ ဒူးနာအရောဂါများအတွက် ဖီးကြမ်းငှက်ပျောသီး အမှည့်ကိုဖင်ဖြတ် ခေါင်းဖြတ်၍ သက်ရင်းကြီးရွက်နှင့် လုံအောင်လိပ်ကာငါးနာရီခန့် ပြုတ်၍ တစ်နေ့ သုံးလုံးစီ ငါးရက်ဆက်တိုက် စားပေးပါက လေဖြတ် လေငန်းလေးဘက်နာ ခါးနာ ဒူးနာနာတာရှည်ရောဂါများ ပျောက်ကင်းကြပါသည်။ (ဝိစိတ္တရတနာမြေ) ငါးကြင်းခေါင်းကိုမကြာခဏ ဟင်းချက်စားခြင်းဖြင့် ဒူးနာရောဂါ၊ ဒူးခေါင်းကျီးပေါင်းရောဂါများကို ပျောက်ကင်းစေနိုင်ကြောင်း ရှေးကဆေးကျမ်းများတွင် ဖတ်ရှုရ၍လက်တွေ့စမ်းကြည့်ရာဒူးထဲမှ ကုန်ခမ်းနေသော ရိုးတွင်းချဉ်ဆီများ အားပြန်လည်ပြည့်ဝလာ၍ တကယ်ပျောက်ကင်းခဲ့သည်။ (တိုင်းရင်းဆေးဆရာကြီး ဦးကြည်မြင့်လွင်) … Read more
Categories က်န္းမာေရးသုတ Leaveacomment
အိမ်ရှင်မတိုင်း သိထားသင့်တဲ့ မီးဖိုချောင်ထဲကအသုံးတည့် နည်းလမ်းကောင်းလေးများနော်
မီးဖိုချောင်ထဲက သိထားသင့်တဲ့ နည်းလမ်းကောင်းလေးများနော် မီးဖိုချောင်ထဲဝင်နေကြ အိမ်ရှင်မတွေဖြစ်ဖြစ် တခြားသူပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဒီနည်းလမ်းလေးတွေကို သိရင် အနည်းနဲ့ အများတော့ အကျိုးရှိစေမမှာဖြစ်တာကြောင့် ပြန်လည်ဝေမျှလိုက်ပါတယ်။ ထမင်းအိုးကပ်သွားပြီး တူးနံ့နံလို့ စိတ်ညစ်နေရင် ဒီနည်းလေးကို စမ်းကြည့်လိုက်ပါလား။ ပေါင်မုန့်ဖြူ တစ်ချပ်ကို အဲဒီထမင်းပေါ်မှာ ၁၅ မိနစ်လောက်အဖုံးအုပ်ပြီး ထားကြည့်လိုက်ပါ။ ထမင်းမှာအနံ့သက်သာသွားတာကို တွေ့ရမှာပါ။ စားတဲ့အခါမှာတော့ အတူးအထိရောက်အောင် မကော်လိုက်နဲ့ဦးနော်။ ဟင်းအိုးတွေ တူးသွားရင် ပွတ်တိုက်မဆေးပါနဲ့။ တူးတာတွေ မြုပ်အောင် ရေထည့်ပြီး မီးဖိုပေါ် တင်ထားပေးပါ။ ပွက်ပွက်ဆူလာရင် အတူးဂျိုးတွေ သူ့အလိုလို ကွာထွက်တတ်ပါတယ်။ ဖြူဖြူလွှလွှ ထမင်းလေးတွေ ရချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ထမင်းအိုးတည်တုန်းဆူကာနီးမှာ လီမွန်ရည် ၂ စက်၊ ၃ စက်လောက်ချထားပေးလိုက်ပါ။ ငရုတ်သီးစိမ်းကြာကြာထားခံအောင် ငရုတ်သီးစိမ်းလေးတွေ ကြာကြာထားခံအောင် ရေမဆေးဘဲနဲ့ အညှာလေးတွေချွေပါ၊ … Read more
Categories ဟင္းခ်က္နည္းမ်ား Leaveacomment
အိမ်သုတ်ဆေး ကိုင်သူ၊ဘထ္ထရီ အိုးပြင်သူ၊ခဲဂေဟတို့သူ၊ ခဲအကျီင်္ဝတ်သူ၊ဓာတ်ခဲထုတ်လုပ်သူတို့ မစားသုံးသင့်သည့် ဆေးဘဲဥ
ဆေးဘဲဥကြိုက်သူများ မဖြစ်မနေဖတ်သွားပါ နော်… ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ အသိ ကိုယ်တိုင်လည်း သိလိုက်ရပြီ ဆေးဘဲဥ (century egg)ကိုစားသင့်သလား ??? ဆေးဘဲဥကို century egg,preserved egg,hundred year egg, thousand year egg, millennium egg ,ထုံးဘဲဥ , ဖီတန် ( တကယ်တော့ တရုပ်လို နာမည်ပါ pidan ) လို့လည်းခေါ်ကြပါတယ်။ ဟိုတလောက maggi လို့ ခေါ်တဲ့လူကြိုက်များတဲ့ခေါက်ဆွဲခြောက် တွေထဲမှာ ခဲဓာတ်တွေ (lead) ပါတာများတာကို အိန္ဒိယမှာ ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ လို့ မက်ဂီး ခေါက်ဆွဲတင်သွင်းထုတ်လုပ်မှုကိုရပ်ဆိုင်းပြစ်လိုက်ပါတယ်။ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ဆေးဘဲဥကို သတိရမိလို့ ဆေးဘဲဥအကြောင်းလေးမျှဝေဖြစ်တာပါ။ ဆေးဘဲဥကိုတရုတ်နိုင်ငံက နေပြီး စတင်ပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်ပြီး ရိုးရာ အားဖြင့် ဘဲဥ … Read more
September 22, 2021 by Latest Myanmar News
နေ့လည်နေခင်း ရေနွေးလေးနဲ့မြည်းဖို့အတွက် ဌက်ပျောဖူးလေးသုပ်စားကြရအောင်.နော်……. မသုပ်ခင် ဌက်ပျောဖူးကို အနီဖတ်တွေကုန်အောင်အရင်ခွာပါ အထဲက အဖြူလေးကျန်တဲ့ထိရရင်အလယ်ကထက်ခြမ်း ခြမ်းပြီး ပါးပါးလှီး ဆားရေထဲကိုထည့် 1 နာရီလောက်စိမ်ထားပေးပါ။ ရပြီဆို ရေနွေးပွက်ပွက်ဆူထဲကိုဆနွင်းမှုန့်လေးထည့်ပြီး5မိနစ်လောက်ပြုတ်ပြီး ပြန်ဆယ် ရေအေးလောင်းပြီးရေပြောင်အောင် ညှစ်ထုတ်ပစ်ပါ။ ရေလုံးဝမရှိတော့တဲ့အထိ ညှစ်ပစ်မှသာသုပ်တဲ့အချိန် ရွှဲရွှဲကြီးမဖြစ်နေမှာပါ။ စသုပ်ပါမယ် ဌက်ပျောဖူး2ဖူး ကြက်သွန်နီပါးပါးလှီး ရေဆေးထည့် ကြက်သွန်ဖြူဆီချက် မြေပဲထောင်း ပဲကျက်မှုန့် ငံပြာရည် ကြက်သားမှုန့်၊..အစပ်ကြိုက်ရင် ငရုတ်သီးစိမ်းထည့် သံပုရာသီးညှစ်ထည့် အားလုံးနှံ့နေအောင် နယ်ပြီး စားလို့ရပါပြီ။ဆိမ့်ဆိမ့်လေးနဲ့အရမ်းကိုကောင်းတဲ့အသုပ်လေးဖြစ်ပါတယ်။ ဌက်ပျောဖူး 300 ဖိုးလေးနဲ့ ခံတွင်းမြိန်စေမယ့်အသုပ်လေးဖြစ်မှာ အသေအချာပါဘဲ..။ Mon Mon Zawgyi ေန႔လည္ေနခင္း ေရေႏြးေလးနဲ႔ျမည္းဖို႔အတြက္ ဌက္ေပ်ာဖူးေလးသုပ္စားၾကရေအာင္.ေနာ္……. မသုပ္ခင္ ဌက္ေပ်ာဖူးကို အနီဖတ္ေတြကုန္ေအာင္အရင္ခြာပါ အထဲက အျဖဴေလးက်န္တဲ့ထိရရင္အလယ္ကထက္ျခမ္း … Read more
တိုက်ခန်း ဝယ်ယူမည်ဆိုပါလျှင် ရန်ကုန်မြို့တွင် ရောင်းချနေသောတိုက်ခန်းများကို ဝယ်ယူရာတွင် သာမန်အားဖြင့် (က) မြေရှင်ထံမှတိုက်ရိုက်ဝယ်ယူခြင်း။ (ခ) ကန်ထရိုက်တာထံမှတိုက်ရိုက်ဝယ်ယူခြင်း။ (ဂ) အဆက်စပ်စာချုပ်များဖြင့်ဝယ်ယူခြင်း စသည်ဖြင့် ဝယ်ယူကြသည်များလည်း ရှိပါသည်။ ထိုသို့ဝယ်ယူရာတွင် ရောင်းသူထံမှ စာရွက်စာတမ်းများကို သေချာခိုင်မာစွာ စိစစ်ပေးသင့်ပါသည်။ ၁။ အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်သည့်တိုက်ခန်းသည် Bcc (အဆောက်အအုံပြီးစီးကြောင်းလက်မှတ် / လူနေထိုင်ခွင့် ) ကျပြီးသောတိုက်ခန်းဟုတ်မဟုတ်။ ၂။ မြေရှင် (သို့) ကန်ထရိုက်တာ ထံမှဝယ်ယူခြင်းဖြစ်ပြီး မြေရှင်သည် တိုက်ခန်းကို ကန်ထရိုက်တာနှင့် အကျိုးတူဆောက်လုပ်သောတိုက်ခန်းဖြစ်လျှင် အနည်းဆုံး မြေရှင် နှင့် ကန်ထရိုက်စာချုပ် ၊ ဂရန်(ရှိလျှင်) စသည်တို့ရှိ၊မရှိ ။ ၃။ ရေမီးနှင့်သက်ဆိုင်သောစာရွက်စာတမ်းများ။ ၄။ ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ထိုက်သင့်သော လုံ့လ ၊ ဝိရိယစိုက်ထုတ်၍ ပေါင်းနှံ၊ ရောင်းချထား … Read more
September 22, 2021 September 22, 2021 by Latest Myanmar News
သံပုယိုသီးဆားရည်စိမ်အခြောက်လှမ်းနည်းလေး မာမာတို့ ငယ်ငယ်က ကျောင်းမှာဝယ်စားနေကျ ရှောက်သီးဆေးပြား အရသာလေးလို စားလို့ကောင်းပြီး ခံတွင်းရှင်း အမူးအမော်ပြေကာ အစာကျေလွယ်တဲ့ သံမယိုသီးဆားစိမ် အခြောက်လှမ်းနည်းလေး မျှဝေလိုက်ပါတယ်ရှင်။ ပါဝင်ပစ္စည်းများ သံပုယိုသီး – ၈လုံးခန့် ဆား – ထမင်းစားဇွန်း ၅ဇွန်းခန့် သံပုယိုသီး ဆားရည်စိမ်ရန် သံပုယိုသီးကို အလုံးလိုက် ရေဆေးပြီး ရေစင်အောင်သုပ်ကာ အောက်ခြေထိ မပြတ်အောင် ၄စိတ်လှီးပေးပါ စိတ်ထားသော အစိတ်ထဲသို့ ဆား လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တစ်ဇွန်းသာသာစီ သိပ်ပေးပါ အားလုံးပြီးလျှင် လေလုံပြီး သန့်နေသော ပုလင်းထဲ သံပုယိုသီးမ်ားကို ဆားသိပ်ထားသော အစိတ်များကို အပေါ်ဖက်မှာ ထောင်ထားပြီး စီထည့်ပေးပါ အဖုံးကိုလေလုံအောင်ပိတ်ပြီး အခန်းအပူချိန်နှင့် အနည်းဆုံး ၅ရက်၆ရက်လောက် ထားပေးပါ ရေထည့်စရာမလိုဘဲ ဆားရည်များပျော်ပြီး အရည်များ ထြက္လာကာ … Read more
September 22, 2021 September 21, 2021 by Latest Myanmar News
ကြွက်ပြေးသော နည်းလေးကြွက်တွေက ပေါလိုက်တာ့ ပေါတာမှ စာအုပ်တွေကိုက် အဝတ်တွေကိုက်ညကျတော့ တစ်ဝုန်းဝုန်းနှင့်ပေါ့ လိုက်တမ်းပြေးတမ်းကစားကြ ၊ကျိန်းမရအောင်ဖြစ့် တစ်ကောင်နှင့်တစ်ကောင်လှမ်းအော်ကြတစ်ခါ တလေများဆို ပြေးရင်းလွှားရင်းခြင်ထောင်အမိုးပေါ်ဒိုင်ဘင်ထိုးချ လွန်တာမှအတော်လွန့်အဲ့ဒါနှင့်ကလေးတွေက ထောင်ချောက်ထောင်မယ် လျှောက်တယ့်မလုပ်နှင့် ဆေးကျွေးမယ်ဆိုတယ့်လုံးဝမလုပ်နှင့်ပေါ့….အဲ့ဒါနှင့်တစ်နေ့ကျတော့ လက်မောင်းအောင့်လို့လင်ဇီးဒါဏ်ကြေဆေးလိမ်းတယ့် ပူလိုက်တာ.. အခိုးကလည်း မွှန်ပြီးမျက်ရည်ပါကျတယ် လူတောင်အနံ့ခိုးရတာနှင့်မျက်ရည်ကျရတယ် ဟိုအကောင်တွေ(ကြွက်)ဆိုဘယ်လိုနေမလဲမသိသူတို့နှာခေါင်းကရှေရောက်နေတာဆိုတော့ ပိုပြီးအနံ့ရမှာပဲဆိုပြီးစမ်းကြည့်မယ်ပေါ့ဆိုတော့ ကျောင်းသားသုံးယောက်ခေါ် ကြွက်လာလမ်း လျှောက်လမ်းတွေ လင်ဇီးတွေ ထူထူသုတ်ပြီး အသာနေလိုက်တာ့ ည(၁၀)နာရီလောက်ကျတော့ သောင်းကျန်းဖို့လာနေကြ အချိန်အတိုင်း ကြွက်တစ်အုပ်ရောက်လာပါရော့ရှေ့ဆုံးကအကောင်က သုတ်ထားတဲ့လင်းဇီးနှင့်နဖူးတွေ့ဒူးတွေ့တွေ့ပြီးကြမ်း ပြင်ပေါ်ပြုတ်ကျ့…သူ့ပါးစပ်က အော်ချင်တာအော်ပြီး ထွက်ပြေးအဲ့ဒီလိုနှင့်နှစ်ကောင်သုံးကောင်လောက်ဖြစ်ရော နောက်ကကြွက်တစ်အုပ်ရှေ့ဆက်မတက်ပဲ အသိုက်ပါပြောင်းတယ်ထင်ပါရဲ့…ခုဆိုကြွက်တွေလာမသောင်းကျန်းတာသုံးရက်ရှိပြီ….. ကျေးဇူးပါလင်ဇီးရေ့ သူ့အသက်မသေပဲ စိတ်ချမ်းသာစွာအိပ်စက်နိုက်တာ။ မူရင်းရေးသားသူ Zawgyi ႂကြက္ေျပးေသာ နည္းေလးႂကြက္ေတြက ေပါလိုက္တာ့ ေပါတာမွ စာအုပ္ေတြကိုက္ အဝတ္ေတြကိုက္ညက်ေတာ့ တစ္ဝုန္းဝုန္းႏွင့္ေပါ႔ လိုက္တမ္းေျပးတမ္းကစားၾက ၊က်ိန္းမရေအာင္ျဖစ့္ တစ္ေကာင္ႏွင့္တစ္ေကာင္လွမ္းေအာ္ၾကတစ္ခါ တေလမ်ားဆို … Read more
သင်ဟာ အသုံးဖြုန်းကြီးသူဖြစ်ရင်တောင်မှ ပိုက်ဆံ တော်တော်များများစုမိနိုင်မယ့် နည်းလမ်းလေးများ ၁။ဒီနည်းလမ်းက၁နှစ်(သို့) ၅၂ပတ် ကြာပါလိမ့်မယ်။ နည်းလမ်း ကတော့အရင်အပတ်ကစုတဲ့ပိုက်ဆံထက်ဒီအပတ်ပိုစုရမယ်။ဥပမာဒီအပတ်၅ဒေါ်လာစုရင်နောက်အပတ်၁ဝဒေါ်လာ၊နောက်တစ်ပတ်၁၅ ဒေါ်လာစသည်ဖြင့်စုပါ။ ၁နှစ်ပြည့်သွားတဲ့အခါပိုက်ဆံတော်တော်များများစုမိမှာပါ။တကယ်လို့အများကြီးစုဖို့ခက်ခဲတယ်ဆိုရင်အသုံးစရိတ်လျော့ချပြီးတစ်ပတ်တစ်ခါစုမယ့်အစားတစ်လတစ်ခါစုပါ။ ၂။ဒုတိယနည်းကကိုယ်ဝယ်မယ့်ပစ္စည်းတွေထဲကငွေအချို့ကိုစုတာပါ ဥပမာ သင်က ဆွယ်တာ ၁ထည်ကိုဒေါ်လာ၃ဝနဲ့ဝယ်မယ်ဆိုရင်၃ဒေါ်လာကိုစုပါဒီနည်းလမ်းကသင့်မှာcredit card ရှိမယ်ဆိုရင်ပိုအဆင်ပြေပါတယ် ဘဏ်အများစုကသင်ဝယ်မယ့်ပစ္စည်းတွေထဲကငွေအချို့ကိုစုပေးပါတယ်။ ၃။နောက်ဆုံးနည်းကတော့မကောင်းတဲ့အလေ့အကျင့်တွေထဲကပိုက်ဆံကိုစုတာပါ။ ဥပမာသင်ကရုံးနောက်ကျလို့ပိုက်ဆံအဖြတ်ခံရတာမျိုးကိုမရှိအောင်လုပ်ပါ၊ ဒီနည်းလမ်းကမကောင်းတဲ့အလေ့အကျင့်တွေကိုပျောက်စေပြီးတစ်ချိန်တည်းမှာပဲငွေလည်းစုမိပါတယ်။ Min Thu ( XYZ NEWS ) Zawgyi သင္ဟာ အသုံးျဖဳန္းႀကီးသူျဖစ္ရင္ေတာင္မွ ပိုက္ဆံ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားစုမိႏိုင္မယ့္ နည္းလမ္းေလးမ်ား ၁။ဒီနည္းလမ္းက၁ႏွစ္(သို႔) ၅၂ပတ္ ၾကာပါလိမ့္မယ္။ နည္းလမ္း ကေတာ့အရင္အပတ္ကစုတဲ့ပိုက္ဆံထက္ဒီအပတ္ပိုစုရမယ္။ဥပမာဒီအပတ္၅ေဒၚလာစုရင္ေနာက္အပတ္၁၀ေဒၚလာ၊ေနာက္တစ္ပတ္၁၅ ေဒၚလာစသည္ျဖင့္စုပါ။ ၁ႏွစ္ျပည့္သြားတဲ့အခါပိုက္ဆံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားစုမိမွာပါ။တကယ္လို႔အမ်ားႀကီးစုဖို႔ခက္ခဲတယ္ဆိုရင္အသုံးစရိတ္ေလ်ာ့ခ်ၿပီးတစ္ပတ္တစ္ခါစုမယ့္အစားတစ္လတစ္ခါစုပါ။ ၂။ဒုတိယနည္းကကိုယ္ဝယ္မယ့္ပစၥည္းေတြထဲကေငြအခ်ိဳ႕ကိုစုတာပါ ဥပမာ သင္က ဆြယ္တာ ၁ထည္ကိုေဒၚလာ၃၀နဲ႔ဝယ္မယ္ဆိုရင္၃ေဒၚလာကိုစုပါဒီနည္းလမ္းကသင့္မွာcredit card ရွိမယ္ဆိုရင္ပိုအဆင္ေျပပါတယ္ ဘဏ္အမ်ားစုကသင္ဝယ္မယ့္ပစၥည္းေတြထဲကေငြအခ်ိဳ႕ကိုစုေပးပါတယ္။ ၃။ေနာက္ဆုံးနည္းကေတာ့မေကာင္းတဲ့အေလ့အက်င့္ေတြထဲကပိုက္ဆံကိုစုတာပါ။ ဥပမာသင္က႐ုံးေနာက္က်လို႔ပိုက္ဆံအျဖတ္ခံရတာမ်ိဳးကိုမရွိေအာင္လုပ္ပါ၊ ဒီနည္းလမ္းကမေကာင္းတဲ့အေလ့အက်င့္ေတြကိုေပ်ာက္ေစၿပီးတစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲေငြလည္းစုမိပါတယ္။ Min Thu … Read more